Sida Loo Sameeyo Website Dib U Eegis leh WordPress, 4 Qodob oo Muhiim ah | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida Loo Sameeyo Mareegaha Dib-u-eegga WordPress, 4 Qodob oo Muhiim ah
Sida Loo Sameeyo Mareegaha Dib-u-eegga WordPress, 4 Qodob oo Muhiim ah
0 Daqiiqado 5 ayaa akhriyay
Daahfurka mareegta dib u eegista waa hab caan ah oo lagu dhex geliyo suuqgeynta xiriirka qorshahaaga ganacsi. Intaa waxaa dheer, waxaa jira fursado kale oo badan oo ku jira niche website-ka dib u eegista kuwaas oo faa'iido leh haddii aad si fudud u taqaano sida loo hirgeliyo si sax ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaadan hubin sida loo bilaabo dhismaha goobtan.
Furaha ayaa ah inaad ku bilawdo qorshe adag, iyo inaad ogaato sifooyinka iyo shaqada goobtaadu u baahan doonto. Qaybaha muhiimka ah, miisaska isbarbardhigga iyo nidaamka qiimaynta, ayaa hubaal ahaan door ka ciyaari doona. Waxa kale oo jira plugins iyo qalabyo badan oo aad hirgelin karto kuwaas oo kaa caawin doona inaad abuurto goob dib u eegis guulaysata.
Maqaalkan, waxaan kaga hadli doonaa sababta aad u rabto inaad abuurto goob dib u eegis, ka dibna ka dood waxyaabaha muhiimka ah ee aad rabto inaad ku darto. Jidka dhexdiisa, waxaan ku tusi doonaa sida loo dhexgeliyo qaar ka mid ah qalabyada waxtarka leh ee WordPress si aad u bilowdo wadada saxda ah. Aan bilowno!
Maxaa Laga yaabaa inaad rabto inaad abuurto goob dib u eegis
Nerdwallet waa goob gaadiid badan leh oo bixisa dib u eegisyada kaararka deynta iyo adeegyada maaliyadeed.
Macaamiishu waxay isticmaalaan boggaga dib u eegista si ay u ogaadaan macluumaadka ku saabsan alaabada ama adeegyada gaarka ah. Goobahani waxay inta badan ka kooban yihiin liisaska alaabta, faallooyinka macaamiisha, iyo qiimaynta ku salaysan faallooyinkaas. Waxaa jira sababo badan oo laga yaabo inaad rabto inaad abuurto boggaaga dib u eegista, sida:
Abuur goob xidhiidhsan ama dakhli ka soo saar xayaysiisyada: Haddi yoolkaagu yahay in aad dakhli ka soo saarto xayaysiisyada ama xidhiidhada, goobta dib u eegista ayaa awood kuu siinaysa inaad sidaa samayso adigoo siinaya adeeg faa'iido leh macaamiisha.
U soo jiitaan dhagaystayaal badan meheraddaada ama balooggaaga: Haddii aad hadda maamusho blog ama degel ganacsi, soo bandhigida dib u eegista waxay kordhin kartaa tirada hits ee goobtaadu ku hesho raadinta, waxayna siisaa macluumaad faa'iido leh dhagaystayaashaada.
Isku dhis maamul ahaan: Helitaanka awoodda gudaha niche ama warshadaha way fududahay in lagu sameeyo goobta dib u eegista.
La wadaag fikradahaaga iyo fikradahaaga: Haddii aad hayso wax aad ka tidhaahdo alaabada ama adeegyada qaarkood, goobta dib u eegista ayaa awood kuu siinaysa inaad la wadaagto fikradahaaga kuwa kale.
Dabcan, waa inaad had iyo jeer qabataa shaqadaada guriga ka hor inta aanad bilaabin nooc kasta oo goob cusub ah. Dhib malaha ujeedada goobtaada dib u eegista, waxaa jira waxyaabo muhiim ah oo aad runtii rabto inaad ku darto.
4 Qodobbada Muhiimka ah ee Goobta Dib u Eegista Gaadiidka Sare
Muuqaalka boggaaga iyo fududaynta adeegsigu waxay muhiim u yihiin isticmaaleyaashaada ugu dambeeya, halka aad u badan tahay inaad xiisaynayso goobta ay fududahay in la ilaaliyo oo soo saarta taraafig badan ama hagitaanno badan. Afarta shay ee soo socda ee goobaha dib u eegista gaadiidka badan ayaa kaa caawin doona inaad gaadho yoolalkan, waana ay fududahay in la hirgeliyo.
1. Qaabka goobta ee dib u eegista saxda ah
Qaab-dhismeedkaagu wuxuu siinayaa akhristayaasha ra'yigooda ugu horreeya ee boggaaga, iyo xulashada saxda ah waxay hagaajinaysaa waayo-aragnimadooda waxayna ku dhiirigelisaa inay ku soo noqdaan wax badan. Intaa waxaa dheer, qaabka boggaga dib u eegista ayaa kaa caawin doona in la go'aamiyo sida ay u fududahay in la hirgeliyo sifooyinka aad u baahan doonto (oo ay ku jiraan kuwa ku taxan qaybaha soo socda).
Halkan waxaa ah dhowr waxyaalood oo muhiim ah oo aad ka raadin karto qaab-dhismeedka goobta:
Dabacsanaanta naqshadeynta. Markaad abuurayso goobtaada, waxaad rabtaa inaad ka fikirto wakhti dheer. Ma rabtid qaab-dhismeed kugu xiraya isla naqshad weligeed ah.
Isku dhafka plugin. Marka ay goobtaadu koraan, waxaad heli doontaa plugins cusub oo kaa caawin doona inaad maamusho oo aad xoojiso. Waxaad dooneysaa inaad doorato qaab-dhismeedka u oggolaanaya is-dhexgalka plugin fudud.
Ka jawaab celinta mobilada. Macaamiisha intooda badan waxay internetka ka galaan aaladaha mobilada. Hubinta in templatekaagu uu jawaab celinayo bilowgiiba waxa ay kaa hor marinaysaa qalooca.
Waxaad ku dari kartaa inta badan walxahan boggaaga adiga oo isticmaalaya qiimeyn & dib u eeg plugins WordPress ah. Gaar ahaan, waxaanu kula talinaynaa dib u eegis ku habboon miisaaniyada:
Dib u eegista ayaa awood kuu siinaysa inaad geliso dib u eegista iyo miisaska isbarbardhigga gudaha fariimahaaga baloogga, boggaga, iyo noocyada boostada gaarka ah. Ma jiraan wax xaddidan oo ku saabsan noocyada dib u eegista ee aad abuuri karto, booqdayaashaadu waxay si fudud uga tagi karaan faallooyinkooda. Waxa intaa dheer, template kasta oo ay bixiso plugin this leeyahay qaabaynta ka jawaabaya.
Si aad u bilowdo dib u eegis, waxaad u baahan doontaa inaad diwaangeliso liisankaaga ka dib marka aad rakibto plugin. Tag Falanqayayaasha gudaha dashboardkaaga, ka dibna dooro License. Waxaad u baahan doontaa inaad foomka ku buuxiso magacaaga isticmaale iyo koodka iibka. Intaa ka dib, waxaad bilaabi kartaa inaad ku darto faallooyin, buundooyin, iyo qiimayn
2. Nidaamka Qiimaynta Joogtada ah
Macaamiishu waxay u muuqdaan inay aaminaan dib u eegista khadka tooska ah ee la xaqiijiyay, laakiin kaliya haddii ay yihiin kuwo joogto ah oo la isku halayn karo. Markaad dooranayso plugin nidaamka qiimeynta, waxaad u baahan doontaa inaad raadiso astaamo gaar ah oo awood kuu siinaya inaad si fudud u hirgeliso qiimeynta goobtaada. Waxa kale oo aad rabi doontaa inaad hubiso in plugin lafteedu leedahay dib u eegis adag, dabacsanaan iyo fududahay in la isticmaalo, oo si fiican ula midoobo template-kaaga. Aynu dib u eegis ku samayno waxay buuxinaysaa shuruudahan oo dhan ka dibna qaar:
Aynu dib u eegno waa plugin premium ah oo si aan kala go 'lahayn ula shaqeeya WordPress-ka dhabarka dambe, oo awood kuu siinaya inaad ku darto shuruudo aan xadidnayn, badhamada gaarka ah, iyo xitaa liiska faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka faallooyinkaaga. Waxa kale oo ay leedahay nakhshad jawaab celin leh, waxayna bixisaa qaabab badan oo la beddeli karo. Ku bilawda plugin-kan waa mid fudud, oo dukumeenti buuxa ayaa laga heli karaa liiska maamulka marka la rakibo.
3. Qaybo qani ah
Marka aad wax ka raadiso internetka, natiijooyinka aad aragto sida caadiga ah waxaa ku jira xiriiriye iyo qoraal sifayn ah. Qoraalkaas, ama 'snippet hodan', ayaa qeexaya bogga isticmaalayaasha iyo makiinadaha raadinta labadaba. Sidaa darteed, oo ay ku jiraan qaybo qani ah ayaa gacan ka geysta hagaajinta darajooyinka raadinta raadinta iyo qiimaha gujinta.
Si aad u hirgeliso sifadan, waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad siiso All in One Schema.org Qaybaha hodanka ah isku day:
Marka lagu daro bixinta noocyo badan oo ka kooban, way fududahay in la rakibo oo waxay leedahay interface si sahlan loo isticmaali karo. Waxaa ku jira dhammaan noocyada schema-ga caadiga ah, sida sawirrada, qiimeynta, iyo qiimayaasha, waxaana si buuxda loogu habeyn karaa goobta maamulka WordPress. Pluginkani waxa kale oo uu awood kuu siinayaa in aad habayso qoraalada si aad ugu darto macluumaad dheeraad ah oo loogu talagalay makiinadaha raadinta. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ka dib rakibidda, waxaad isticmaali kartaa horumarinta saaxiibtinimada golaha bulshada.
4. Miisaska Isbarbardhigga
Markaad wado goob dib u eegis, waxaad inta badan rabi doontaa inaad is barbar dhigto badeecooyin badan oo muuqaal ah. Tani waa halka miisaska isbarbardhigga ay ku yimaadaan anfaca. Nasiib wanaag, TablePress waxay awood kuu siinaysaa inaad ku darto jaantusyo leh safaf badan iyo tiirar intaad u baahan tahay, oo aad habayso qaabkooda adigoon isticmaalin HTML:
Plugin-kan, waxaad si fudud ugu maareyn kartaa miisaskaga goobta maamulka WordPress, oo waxaad ku dari kartaa meel kasta oo mawduucaaga ah. Tani waa dariiqa ugu fiican ee lagu barbar dhigi karo badeecadaha kala duwan ee ku salaysan qiimaha, sifooyinka muhiimka ah, waxqabadka, iyo in ka badan - siinta dhagaystayaashaada macluumaad muhiim ah ma doonayaan inay raadiyaan. Qaybta ugu fiican ayaa ah in xitaa kuwa bilawga ah aysan wax dhib ah kala kulmi doonin bilaabida TablePress.
Dhisidda goobta dib u eegista waa hab caqli badan oo lagu kordhinayo daawadayaashaada, taraafikada, iyo xitaa dakhliga suuqgeynta ee xiriirka la leh. Nasiib wanaag, bulshada WordPress waxay ka dhigtaa habka mid fudud iyagoo siinaya waxyaabo badan oo faa'iido leh oo sahlan si loo hirgeliyo kuwaas oo bixiya shaqeynta loo baahan yahay.
Ma qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan sida loo dhiso goobta dib u eegista gaadiidka sare? Noogu sheeg qaybta faallooyinka ee hoose!
Hagaha Bilowga ah ee Isticmaalka Bogagga Mobilka La Dadajiyay (AMP) ee WordPress
Waa maxay sababta ay tahay inaad tixgeliso Vlogging iyo sida loo bilaabo
Sida loo isticmaalo FileZilla sida Pro (iyo sidoo kale xalliso khaladaadka)
Sida Loo Sameeyo Shaxda Elementor gudaha WordPress
Sida loo barto HTML… Degdeg ah
ProtonMail vs Gmail: Hagaha Isbarbardhigga Ugu Dambeeya
Martigelinta Wakaaladaha: Growth Suite wuu wada sameeyaa
6 Hagaajinta Dukaanka Xagaaga si aad u dejiso goobtaada Dayr yaab leh
WordPress 6.1: Waxa la filayo
Sida Loo Sameeyo Madaxa Dheefanka Wanaagsan ee Boggaga WordPress
saac ka hor 7
saac ka hor 8
Warbaahinta bulshada 734
Content Suuq 699
cusboonaysiinta EverCache® waxay u keentaa faa'iidooyin wax qabad smart WooCommerce
Halyeyga Shaqaale: Taageerada WordPress u go'an ee Dadka Mashquulka ah
Sida Loo Muujiyo Taariikhda Ugu Dambeysay Ee La Cusbooneysiiyay Boostada iyo Bogagga WordPress
Sida Loo Isticmaalo Kediska WordPress ee Suuqgeynta
27 WordPress Block Mawduucyada Ku Wanaagsan Tafatirka Goobta Buuxa
Sida loogu Haajiro Boggaga WordPress ee WP Engine
Sida Loo Sameeyo loona Isticmaalo Tabs Elementor
Doorashada Qaybta Fidinta Wanaagsan ee Ganacsigaaga (3 Talooyin)
Elementor Cloud Web Review - Ma u qalantaa? 
Domains Google vs GoDaddy: Diiwaan Geliyaha Domain ee uu dooranayo
Ka Samaynta Ka beddelashada Falanqaynta Caalamiga ah una beddelo Google Analytics 4 (GA4)
Sida loogu daro Xisaabiyaha Qiimaha Mareegtaada WordPress
MongoDB vs PostgreSQL: 15 Farqiga Muhiimka ah
Google Search Console vs Google Analytics: waa maxay faraqa u dhexeeya?
PHP 8.2: Waxa La Filayo (Hagaha Horumarinta)
Caddaynta Bulshada Ecommerce Hababka Ugu Fiican
10ka Farriimo ee ugu Fiican WordPress ee loogu talagalay 2022
Bixinta – Guulayso 1 ee 2 Elementor Cloud Ruqsad Sannadeedka!
10ka Xul ee ugu sareeya ee Elementor 2022
Qiimaha Bluehost: Immisa ayay ku kacaysaa? Qorshekee Ugu Wanaagsan?
Shaqada Adeeg ahaan (FaaS): Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Sida loo Beddelayo Domainkaaga Adigoon Waxyeeleyn SEO iyo Luminta Taraafikada Mareegaha
Modula vs FooGallery: Keebaa ugu Fiican Sawirka Sawirka WordPress?
Iibinta Khadka Tooska ah: .DOmainyada SHOP Hadda waa bilaash wakhti xaddidan
Sida Loo Abuuro Alaab Kala Duwan ee WooCommerce
Sida loo wanaajiyo Kinsta WordPress Hosting oo leh WP Rocket
Hage Dhamaystiran oo loogu talagalay Soo-baxa Qaybaha (iyo sida loo Abuuro)
Sawirka sawirka: LGBTQ Metelaya Sawirka Kaydka (26 Isha)
Sida Loo Sameeyo Email Ganacsi Boggaga WordPress
Waa maxay Helitaanka Matoorka WP ee Alaabta Maskaxda ee Wanaagsan Adiga Adiga
Hagaha Bilowga ah ee Lacag-bixinta WooCommerce
Wadaagga Suuqa WordPress: 2022-2023 & Wixii ka dambeeya
Sida Looga Dhaqaajiyo Beeshaada PeepSo (6 Hab)
PostgreSQL vs SQL Server: 16 Farqiga Muhiimka ah
Sida Loo Sameeyo Websaydh eLearning WordPress ah oo leh Tutor LMS
Tusaha Sumcada Domain: Sida Loo Horumariyo Taaga iyo Kor Loogu Qaado Gaarsiinta iimaylka
Su'aalaha Is-diiwaangelinta Domain Gaarka ah
Ammaanka iThemes: Sug boggaaga WordPress oo lasoco Noloshaada
17 Hababka Lagu Wanaajinayo Waxqabadka Laravel
Sida Loo Dhoofiyo Loona Soo Dejiyo Shabakadaha Elementor (Hagahaaga Dhamaystiran)